Falanqaynta dhibaatooyinka iyo sababaha caaryada duritaanka!
Qallooca, qalloocinta iyo qalloocinta alaabooyinka qalloocan ayaa inta badan sabab u ah xaqiiqda ah in heerka hoos u dhaca jihada qulqulka uu ka weyn yahay midka toosan inta lagu jiro qaabeynta balaastikada, taas oo keenta in qaybaha ay leexdaan sababtoo ah heerarka dhimista ee jiho kasta . Waa...
Waa maxay sababta caaryada leh qaababka alaabada adag ay ugu baahan yihiin kanaalo qaboojinta waafaqsan?
Waxaan ognahay in si aad u hesho wax soo saarka qallafsan duritaan, ugu yaraan laba dhibcood waa in maskaxda lagu hayaa: inta lagu guda jiro qaabaynta duritaanka, xawaaraha socodka ee dhalaalidda ee godka waa la mid ah sida ugu macquulsan, iyo heerkulka derbiga godka. caaryada waa sida ugu macquulsan. Hadii kow...
Talooyinka dayactirka caaryada duritaanka iyo dayactirka
Ka sii wadida maqaalkii ugu dambeeyay, waxaan sii wadi doonaa inaan ka hadlo qayb kale oo ka mid ah talooyinka dayactirka caaryada duritaanka iyo dayactirka. 1. Marka uu qalliinku baxo oo uu u baahdo in si ku meel gaar ah loo xidho, waa in caaryada la xidhaa si aan daloolka iyo xudunta u soo bixin si looga hortago...
Caagagga qashin-qubka waxay leeyihiin shuruudo aad u sarreeya. Guud ahaan, ilaalinta deegaanka alaabta PP ayaa inta badan la isticmaalaa, taas oo soo saari karta dusha sare ee dhalaalaya ka dibna samayn kara daabacaadda filimada iyo daaweynta kale, taas oo noqota qashinka-dhamaadka sare. Laakin si loo sameeyo qashin-qubka wanaagsan, marka hore, tayada...
Waa maxay qaab-dhismeedka mol caag ah
Horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada, horumarinta caaryada caagga ah ayaa aad u dhaqso badan meelo badan. Caagagga caagga ah waa qalab ku habboon mashiinnada wax-ku-samaynta caagga ah ee warshadaha wax-soo-saarka caagga ah si loo siiyo badeecadaha caagga ah qaabayn dhammaystiran iyo cabbir sax ah. Sababo la xiriira...
Isticmaalka saxda ah ee caaryada duritaanka
Sidee si sax ah loogu isticmaalaa caaryada duritaanka? Aojie ayaa kuu jawaabi doona! 1.Furitaanka iyo xidhitaanka xawaaraha caaryada iyo hagaajinta ilaalinta danab yar Marka caaryada duritaanka la furo ama la xiro, sharciga isbeddelka xawaaraha waa "slow-fast-slow" 3 heerarka xawaaraha. Habka xidhitaanka caaryada, si ay u ...
Kala soocida caaryada duritaanka
Waa maxay noocyada caaryada duritaanka ee loo qaybin karaa? Kala soocida caaryada caadiga ah waxa loo qaybin karaa qaybahan soo socda: 1.Cirbadaha duridda dusha sare ee Single Parting Marka la furo caaryada, caaryada dhaqaaqa iyo caaryada go'an ayaa la kala saaraa, waxaana la soo saaraa qaybta caaga ah, taas oo loo yaqaan ...
Tayada caaryada 11kii sano ee la soo dhaafay, Aojie Mold waxa ay noqotay mid ka mid ah shirkadaha caaryada ee ugu waaweyn Shiinaha. Intii lagu jiray 10 ilaa 15kii sano ee ugu horreeyay ee horumarinta warshadaha caaryada ee Shiinaha, shirkadahaas xoogga saaray tayada caaryada iyo maaraynta tayada waxay gaadheen horumar degdeg ah. Aojie Mold waa ...
Farsamada Cusub ee Caagagga ah
Waxaa jira qaar ka mid ah mabda'a aasaasiga ah ee doorashada birta caaryada. 30%, iyo saamiga soo dejinta iyo dhoofinta caaryada waa sida ugu sarreeya 50 ~ 70%. Alaabooyinka balaastikada ah Waxaa si weyn loo isticmaalaa waxayna siisaa suuq aad u ballaaran oo loogu talagalay caaryada caagga ah. Intaa waxaa dheer, ay wadaan...
Sidee Loo Doortaa Birta Caaryada?
Waxaa jira qaar ka mid ah mabda'a aasaasiga ah ee doorashada birta caaryada. A. birta caaryada waa inay buuxisaa xaaladdeeda shaqo. 1. caabbinta abrasive. Marka balaastiggu ku qulqulo godka caaryada, waxaa jiri doona khilaaf xooggan oo u dhexeeya balaastiigga iyo dusha daloolka, iyo in ka sii badan...